Fampitahana finday: Doogee V10 vs Doogee V20 | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 20/12/2021 08:51 | Finday, telephony
Doogee dia manohy miloka eny an-tsena ho an'ny finday maranitra sy mikitoantoana, izany hoe manana andiana toetra mampiavaka azy ireo ary mahatohitra indrindra. Toy izany no nahatonga azy ireo hamoaka ny V20, fitaovana iray napetraka ho faratampony amin'ny traikefa sy fanoloran-tena an-taonany maro. Ny Doogee V20 vaovao no mpandimby mivantana ny Doogee V10, modely iray nahazo vokatra tsara. Samy manana fitoviana ireo fitaovana roa ireo, saingy mazava ho azy fa manana fahasamihafana lehibe izy ireo noho ny fanavaozana lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy, mampitaha azy ireo izahay.
Araraoty Tolotra Doogee V20 Dual 5G amin'ny fisoratana anarana amin'ireo mpividy 1.000 voalohany.
1 Mitovy amin'ireo fitaovana roa ireo
2 Ny fahasamihafana eo amin'ireo fitaovana roa ireo
Mitovy amin'ireo fitaovana roa ireo
Iray amin'ireo fitoviana lehibe amin'ireo fitaovana roa ireo ny hoe samy miainga amin'ny petra-kevitra izy ireo fa raha tsy tapaka dia tsy voatery amboarina. Ireo modely roa ireo dia mametraka processeur valo-fototra mba hanatsarana ny fahombiazany ary hanolotra endri-javatra mifanaraka amin'ny toetr'andro. Toy izany koa, Izy ireo dia manana sensor fanondro eo amin'ny sisin'ny fitaovana, fakan-tsary selfie 16MP ary fiampangana haingana hatramin'ny 33W miaraka amin'ny NFC. ary fanohanana ireo fatra maro izay mahatonga azy ireo hifanaraka tsara amin'ny faritany rehetra.
Ahoana raha tsy izany, samy manana ny mari-pamantarana ambony indrindra amin'ny fanoherana ny toetr'andro ratsy isan-karazany toy ny IP68, IP69K ary mazava ho azy ny fenitra miaramila MIL-STD-810 miaraka amin'ny fanamarinana vokatr'izany.
Na izany aza, fotoana izao hifantohana amin'ireo fahasamihafana mibaribary.
Ny fahasamihafana eo amin'ireo fitaovana roa ireo
Amin'ny maha toetra mampiavaka azy, ny Doogee V10 taloha dia manana thermometer infrarouge ao ambadika mba hahafahana mandrefy haingana ny hafanana, na izany aza, miaraka amin'ny Ny Doogee V20 dia naniry ny handeha lavidavitra kokoa ary nanampy efijery misy fanavaozana ao ambadika izay hanome antsika fampahalalana sasany toy ny fampahafantarana, ny fotoana sy ny maro hafa. Zavatra izay tsy hitanay afa-tsy amin'ny terminal sasany avo lenta.
Efijery AMOLED tsara kokoa sy famaha avo kokoa
Ecran aoriana mba hanomezana vaovao antsika
Ny efijerin'ny anoloana na ny efijerin'olon-dehibe koa dia nitsambikina lehibe, ary manana efijery mamirapiratra isika izao AMOLED miaraka amin'ny resolution 6,43-inch FHD +, izay tonga hanolo ny LCD mahazatra 6,39-inch HD + resolution izay napetraka tamin'ny Doogee V10. Izany dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo dingana lehibe indrindra amin'ny resaka fampifanarahana amin'ny teknolojian'ny taranaka farany, toy izany koa ny Ny tontonana AMOLED an'ny Doogee V20 novokarin'i Samsung dia hanolotra lafiny 20: 9. raha ampitahaina amin'ny 19: 9 an'ny Doogee V10, miaraka amin'ny fifanoherana lehibe sy ny fahaiza-manao HDR, dia manatsara ihany koa ny famirapiratana azony atolotra.
Amin'ity tranga ity dia mihena be ny haben'ny mAh amin'ny bateria, Raha ny Doogee V10 dia nanolotra 8.500 mAh, ny Doogee V20 vaovao dia hijanona amin'ny 6.000 mAh. Raha samy mitazona ny fiampangana haingana 33W, Ny Doogee V20 vaovao dia hanolotra fiampangana an-tariby miaraka amin'ny fenitra Qi hatramin'ny 15W, izay mihoatra ny 10W amin'ny fiampangana tsy misy tariby izay tazonin'ny Doogee V10 hatreto. Izany dia mahatonga ny Doogee V20 ho maivana kokoa sy maivana kokoa, na izany aza, Doogee dia mampanantena fa ny fotoana fampiasana ny fitaovana dia tazonina miaraka amin'ny bateria ambany kokoa noho ny fanatsarana na ao amin'ny Rafitra Operating sy amin'ny haavon'ny hardware, izany rehetra izany dia mazava ho azy fa mandray soa avy amin'ny tontonana AMOLED. ankehitriny dia mampiasa sy izay manatsara ny fanjifàna ny efijery eo.
Ny fakan-tsary dia iray amin'ireo teboka niharan-doza indrindra tamin'ny fanavaozana, andao hojerentsika ireo fakantsary roa:
Fakan-tsary lehibe 64MP
Fakan-tsary fahitana alina 20MP
Fakan-tsary lehibe 48MP
Fakan-tsary Macro 2MP
Nanomboka tamin'io fotoana io dia nihatsara ny fakan-tsary araka ny efa hitantsika, raha mbola mitoetra (araka ny voalazanay teo aloha) ny fampisehoana tsara ny fakan-tsary selfie 16MP eo anoloana.
Amin'ny ambaratonga fitadidiana sy fitahirizana, ny Doogee V20 dia mitombo avy amin'ny 128GB an'ny V10 mankany amin'ny 256GB amin'ny modely ankehitriny, mampiasa teknolojia UFS 2.2 hanatsarana ny fahombiazan'ny famindrana angona. Mazava ho azy fa tazonina ny fitadidiana 8GB an'ny RAM an'ireo fitaovana roa ireo.
Azo lazaina fa ny Doogee V20 no fivoarana miharihary izay mikendry ny hanohana ny lova navelan'ny Doogee V10, ny fitohizan'ny Doogee V Series izay hatolotra ihany koa miaraka fihenam-bidy lehibe sy tolotra ao amin'ny vavahadin-tserasera Doogee ofisialy. Hambara tsy ho ela ny datin'ny famoahana ary horaisina ho an'ireo tia telefaona mavesatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Fampitahana finday: Doogee V10 vs Doogee V20